Masero Akafa anotangisa hutsinye hutsva | Linux Vakapindwa muropa
Masero Akafa mutambo wevhidhiyo inowanikwa mukati chitoro chemhepo (zveWindows chete panguva ino) uye zvakare muGOG yazvo zvirokwazvo iwe unotoziva chimwe chinhu, uye kana zvisiri, pano tichataura nezvazvo. Kunyangwe iyo chaiyo nhau ndeyekuti zita racho rakaburitsa hutsinye hutsva, uye hachisi chirevo, sezvo 20% zvimwe zvemukati zvakawedzerwa papuratifomu vhidhiyo mutambo. Kutanga nekuvandudzwa kweyakare nhare / hunyanzvi / hutano system neimwe yakavakirwa pahutsinye / hunyanzvi / kupona, pamwe nezvinhu zvitsva, zvombo, nhovo, kugona, vavengi, nezvimwe.
Masero Akafa, kune avo vasingazvizive rakafuridzirwa castlevania, asi nemaitiro ayo. Chii chinoitika kana iwe ukafa? Mune mimwe mitambo zvese zvinopera, asi heino chakanakisa chishandiso chekudzidza kudzivirira kudzokorora zvikanganiso zvakafanana uye nekupa kubata kwakasiyana kune mimwe mitambo yemhando imwechete. Mune mimwe mitambo, pavanokuuraya, iwe unofunga nezve izvo zvawakatadza kudzidza uye kusaita chikanganiso chimwe chete zvakare uye nezvaunogona kuita zvakasiyana kuyedza kutiza usina kukuvara, asi pano zvese zvinochinja ... Izvo hazvichabatike kwatiri .
Nguva dzese iwe paunourawa mumaCell Akafa, iwo matanho emutambo wevhidhiyo anozochinja, saka isu tinogara tichishamisika nenhau. Naizvozvo iwe uchafanirwa kudzidza kudzidza kugadzirisa uye zvinoenderana nehunyanzvi hwako uye nekufungisisa, uye kwete pakudzokorora mashandiro akafanana kusvikira zvese zvaenda mushe sevamwe. Pese paunorasikirwa nehupenyu hwako uchaona kuti iro danho rauri rakachinja, saka zvichaita sekutanga kubva pakutanga ... Izvi zvinoita kunge zvinonakidza here?
Uye ndedzipi pfungwa dzakatsauka dzauya nepfungwa iyi? Zvakanaka ku ivo Vanofamba Mapatya vakomana, iyo indie studio yevagadziri iyo yakavambwa mu2001 uye iyo yakapa hupenyu kune ino inonakidza mutambo uyo wakanyanya kupindwa muropa. Zvakanaka kuva nemitambo yemavhidhiyo akasiyana, kwete mazita makuru eLinux, asi zvakare ese aya mazita emitambo isingazivikanwe kubva kumatudiyo madiki asingakwanise kukwikwidzana nezviwanikwa asi nemifungo inoshamisa… Hongu, yeLinux! Sezvo ivo vari kushanda kuti vauye nayo kuMac uye Linux munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Masero Akafa anoburitsa hutsinye hutsva
Asi kubva pane zvandingaverenga pane iyo Steam chitoro, inongowanikwa chete yeWindows
Mhoro Marcos, hongu. Yakanga iri mhosho yangu, parizvino inongowanikwa yeWindows asi basa riri kuitwa kuunza iyo kuMac neLinux munguva pfupi ...
unogona kugara uchiedza waini, playonlinux nezvimwe.
Jose Alvarez akadaro
Ini ndoziva zvinoita kunge zvisina hunhu asi iyo pirate vhezheni yemasero akafa inomhanya pawaini. ndeyekuti ini ndiri murombo uye handigone kuitenga
Pindura kuna jose alvarez